Wholesale Rori Rakatasva Mudziyo Rutivi Loader Anosimudza Mugadziri uye Mutengesi | CCMIE
Max. vachisimudza chinzvimbo: 37 tani
Rori divi: 9800mm * 2500mm * 4100mm
Maasi: 4 maekisero
Tire: zvikamu gumi nezviviri
Rutivi rwekusimudza: MQH37 (ATP)
CCMIE inogadzira Truck Yakakwira Container Side Loader Lifter iyo yakaiswa pa8X4 chassis, kazhinji tinoiisa pane Sinotruck chassis, pane IVECO chassis, kana kuiswa pane 20ft semi tirera. Rori Rakatasva Container Side Loader Anosimudza inogona kushandiswa kurodha uye kudzikisa 20ft mudziyo ine 37 ton kusimudza kugona. CCMIE Rori Rakatasva Mudziyo Rutivi Loader anosimudza
ine mukurumbira brand isina waya kure controller uye iwe zvakare unogona kushandisa iyo crane nemaoko
Basa redu reCCMAIE nderekuve inovandudza chiteshi chemidziyo yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro nedhijitari zvekushandisa nekupa dhizaini uye dhizaini, yepasirose-kugadzira uye kugadzirisa kugona kwehunyanzvi dhizaina yeChina 20FT 40FT Sidelifter Rori Yakakwira Container Side Loader Lifter. Loade, yedu CCMIE sehunyanzvi mune ino chaiyo ndima, isu takazvipira kugadzirisa chero chinobatika kutakura nhumbi uye kurodha uye kudzikisa matambudziko kune vashandisi.
Nehunyanzvi hwakagadzirwa maChinese ekumhara, emidziyo yemidziyo, ese ekunze michina anonyatso kutonga uye kuona kurongeka kwekugadzirwa kwechigadzirwa. Uye zvakare, isu tine boka remaneja emhando yepamusoro uye nyanzvi, tinogadzira zvinhu zvemhando yepamusoro, uye tinokwanisa kugadzira zvigadzirwa zvitsva zvekuwedzera misika yedu yekunze neyekunze. Isu tinotarisira nemoyo wese kuti vatengi vachabudirira kune redu bhizinesi.
1) Hazvibvumirwe kushandisa iyo Truck Yakakwira Container Side Loader Lifter pasi pemagetsi emagetsi emagetsi.
2) Ita shuwa kuti nzvimbo yebasa yakawedzeredzwa, usati watanga basa, ive shuwa yekudzidza nzvimbo yebasa, nzira dzinoenda kunzvimbo yebasa, kuvepo kwezvipingamupinyi uye nzvimbo dzeimwe michina.
3) Iyo pasi yebasa saiti inofanirwa kuve yakasimba uye yakaenzana, iyo yakatenuka iri pasi pe3% uye iyo nzvimbo haina kunyura panguva yekushanda.
4) Ipa kuvhenekera kwakakwana kuitira kuti kufamba kwemuchina nemutoro zvinyatsoonekwa.
Kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwebasa, ive shuwa yekugutsa pazasi zvinodiwa.
1) Nharaunda tembiricha: -20 ° C ~ + 40 ° C;
2) Mhepo inomhanya haipfuuri 13.8m / s.
Zvadaro: Side Loader
Chizere Midziyo Reach Stacker
Empty Mudziyo Handler-ZHD90C7